पूर्व आइजीपी अर्यालका छोरा जेल जाने संभावना , मुद्दा मिलाउन अदालतमा चलखेल | My News Nepal
पूर्व आइजीपी अर्यालका छोरा जेल जाने संभावना , मुद्दा मिलाउन अदालतमा चलखेल
२०७५ बैशाख ९ गते
काठमाडौं । ज्यान मार्ने मुद्दामा नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका छोरा डा. आयुष अर्यालमाथिको मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदैछ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा आयुष अर्यालको मुद्दा सुनुवाइ हुँदैछ ।
केटी काण्डमा आयुषमाथि डा.अनिमेष ठाकुरको हत्याको आरोप लागेको छ । छोरालाई हत्या आरोपबाट बचाउन अर्यालले पदको शक्ति दुरुपयोग गरी कास्की प्रहरीलाई किटानी जाहेरी नै लिनबाट रोकेका थिए । अर्यालले पोष्टमार्टम रिपोर्टमै चलखेल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अर्यालले अदालतमा केही दलालमार्फत मुद्दा मिलाउन चलखेल गरेका छन् । अर्यालले पुर्व महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई प्रयोग गरी मुद्दा चल्न नसक्ने निर्णय गराएका थिए ।
अर्याल आइजीपीबाट अवकाश हुनु एक महिनाअघि २०७३ माघमा महान्याधीवक्ता कार्यालयबाट सुटुक्क आयुष अर्यालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । अनिमेष ठाकुरको मृत्युपछि परिवारले दिएको उजुरी किन दर्ता नगरेको भनेर अदालतले प्रहरीसँग कारण मागेको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने अपेक्षा अनिमेशका बुवा डा. जीडी ठाकुरले गरेका छन् । ‘उपेन्द्रकान्त अर्यालका छोराले मेरो त जिन्दगी बर्बाद गरिदिए’ एमडी गरेको छोरो गुमाएका डा. ठाकुर अहिले पनि भक्कानिंदै भन्छन्–‘सर्वोच्च अदालतले दोषीलाई संजाय दिएर न्याय दिने अपेक्षा गरेको छु ।’मणिपाल मेडिकलकलेजमा अध्ययनरत डा अनिमेष ठाकुरको २०७२ असार १९ मा सोही कलेजको तीन तलामाथिबाट आयुशले धकेलेर हत्या गराएका थिए।